Italy Archive - Gool FM - page 2	twitter
“Waxay noqon doontaa ciyaar ka duwan middii dhacday 2 sano kahor. Juventus iyo Barca labaduba way is bedeleen, waxaa intaa dheer markan final dheeli maayaane waa kulan laba lugoodle ah oo 180 daqiiqo ah,” ayuu 
“Haatanse sidiisii ayuu kusoo laabtay, waxaana filaynaa 
”Waxaan ahay Milanista waana sii joogayaa” – Gianluigi Donnarumma oo u dayriyay kooxaha doonaya!
(Coverciano) 20 Maarso 2017 – Qabtaha da’da yar ee AC Milan ee Gianluigi Donnarumma ayaa daboolka ka rogey in uu ”rajaynayo inuu sii joogo” naadigiisa maaddaama uu Milanista.
Wiilkan 18-jirka ah ayay su’aashan taageerayaashu waydiiyeen mar uu marayay saldhigga tareennada ee magaalada Florence isagoo u socda xerada uu ku tababarto xulka Talyaaniga ee Coverciano.
Maaddaama uu bishan Febraayo 25 uu laacibku 18-jirsadey, wuxuu ‘Gigio’ saxiixi karaan heshiis rasmi ah, balse waxaa arrintan dib u dhigaya dib u dhacyada joogtada ah ee iibka 
XULKA SERIE A: Waa kuwee 11-ka laacib ee todobaadkan ugu wanaagsanaa Serie A?
(Roma) 20 Maarso 2017 – Waxaa todobaadkan la ciyaaray joowladii 29-aad ee horyaalka Talyaaniga oo meel xasaasi ah haatan maraya, iyadoo kulankii todobaadkan ugu adkaa uu ahaa midkii Torino vs Inter oo 2-2 ku dhamaaday, haddaba aynu eegno qiimaynta Dave Tylor.
Emerson Palmieri [Roma]
Fabio Pisacane [Cagliari]
Leonel Vangioni [Milan]
Daniele Baselli [Torino]
Afriyie Acquah [Torino]
Blerim Dzemaili [Bologna]
Matias Fernandez [Milan]
Xarfaanta xusidda mudan: Lucas Ocampos [Milan], Simone Verdi [Bologna], Geoffrey Kondogbia [Inter], Rodrigo de Paul [Udinese], Duvan Zapata [Udinese], 
Tababare Allegri oo ka hadlay dhaawaca Paulo Dybala
(Torino) 20 Maarso 2017 Kooxda Juventus ayaa wadnaha farta ku haysa kadib markii uu xalay dhaawac ku baxay weerar yahankooda Paulo Dybala.
23 jirkaan ayaa laga saaray ciyaarta daqiiqadii 28 kadib markii uu awoodi waayay inuu dhamaysto ciyaarta, Juventus ayaana 1-0 uga adkaatay kooxda Sampdoria.
Tababare Allegri ayaa hoos u dhigay qatarta dhaawaca Paulo Dybala, wuxuuna sheegay in laacibku uu ka sheeganayo kaliya dhaawac fudud.
“Maalmo yar ka hor, Dybala wuxuu ka sheegtay xoogaa dhibaato dhanka muruqa ah, haatana markale ayuu ka sheegtay dhaawac yar, laakiin 
Serie A: Juventus oo garaacday Sampdoria iyo Napoli oo ka adkaatay Empoli (SAWIRRO)
(Torino) 19 Maarso 2017 Kooxda hogaanka u haysa horyaalka talyaaniga ee Juventus ayaa guul ka gaartay kooxda Sampdoria oo ay marti u noqdeen.
Wiilasha tababare Allegri ayaa sii dheereystay farqiga dhibcaha ee ay ka sareeyaan kooxda ku soo xigta ee Napoli oo haatan ah 10-dhibic, inkasta oo Roma ay ka dhigi karto farqigaas 8-dhibic hadii ay ka adkaato kooxda Sassuolo.
Daqiiqadii 7-aad ee bilowgii ciyaarta, Juan Cuadrado ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Juventus isaga oo ka dhigay ciyaarta 1-0.
Sampdoria ayaa isku dayday inay soo 
Macallinka Giampiero Ventura ayaa dhowr laacib xulka kusoo kordhiyay, kuwaasoo kala ah garab-weerarka Atalanta 
Badrooniga Juve ayaa sheegay in loo yeeray oo uu ka marqaati furi doono arrintan isagoo hortegaya Guddiga la Dagaallanka Maafiyada ee Anti-Mafia Commission iyadoo loo haysto xiriir la sheegay inay la leeyihiin maafiyada gobolka Calabria ee loo yaqaanno 